Silicone & Rubber Zvikamu Kugadzira - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co, Ltd.
Chengda Rubber & Plastiki izere-sevhisi yakagadziriswa silicone uye zvigadzirwa zverabha zvigadzirwa, isu takashongedzerwa nemaseti matanhatu epamberi erabha yekumanikidza michina (kubva ku100tons kusvika 300tons, hukuru hukuru-hwendefa saizi ndeye 46 inches), yega silicone yekuvhenganisa imba uye yerabha kusanganisa imba, inowirirana zvizere neakazvigadzira ekuumba, kuburikidza neyakajeka kuyerwa uye kuongororwa kweyakaomarara mhando kudzora, inogona kuburitsa yakakwira-chaiyo tsika yerabha gasket & chisimbiso, yetsika yerabha yakadhonzwa, ese marudzi etsika yerabha uye nesilicone zvikamu maererano nezvinodiwa nevatengi vedu.
Kazhinji, isu tinokurudzira iyo chaiyo yekugadzirisa sarudzo yevatengi vedu zvichibva pamutengo wakakwana wemutengo, pazasi ndiyo yakatsanangurwa sumo yeiyo nzira yesilicone rabha yekumanikidza sevhisi.
Zvigadzirwa Zvokugadzira Sevhisi:
Kuomesa kuumba ndiyo nzira iyo inoisa iyo preformed yerabha zvinhu zvakananga muforoma matanda, wobva wavhara fomu uye wobatirira kwechinguva, iyo yerabha zvinhu inotsimbirirwa kune chimiro chemakomba pasi pehumwe kumanikidza uye tembiricha.
Iyo ndiyo inowanzo shandiswa yerabha yekugadzirisa nzira, nekuda kwemutengo wakaderera wekushandisa, mamwe maburi, akakodzera kudiki-saizi kana yepakati-saizi kugadzirwa.
Chigadzirwa Kugadzira Maitiro:
Isa zvinhu zverabha mumakomba eforoma.
Vhara kumusoro kweforoma uye ubatise pasi peyakaomeswa tembiricha uye tembiricha apo irabha zvinhu zvinopora.
Kana mushonga wapedza, vhura fomu uye bvisa chikamu.